RW Cabdiweli ?weerarkii hotel Jaziira wuxuu sii xoojin doono dagaalka lagula jiro Argagixisada? – Radio Daljir
Janaayo 2, 2014 3:23 b 0
Muqdisho, January 2, 2014 – Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ku tilmaamay weerarkii lagu fashilmay ee lagu qaaday hotelka Jaziira ee Muqdisho in uu ahaa mid fulaynimo ah, liddi ku ah diinta Islaamka, siina xoojin doona xiriirka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo si wadajir ah uga guulaysan doona naf-lacaariga waqtigoodu dhamaaday ee argagixisada Al-shabaab.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa ku ammaanay ciidanka Booliska iyo kooxaha gurmadka dag daga ah sidii ay uga hortageen weerarkaasi,uguna gurmadeen shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi ay dhibaatadu ku qabsatay, Waxaana uu Ra?iiusl Wasaaraha Soomaaliya tacsi tiiraanyo leh la qaybsaday eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen kuwii ay jeclaayeen, wuxuuna ilaahay uga baryay in uu caafimaad dag dag ah siiyo intii ku dhaawacantay falkaasi.
?Weerarada ay soo qaadayaan kooxaha xagjirka ah sida kii ay ku hungoobeen ee xalay lagu qaaday hotelka Jaziira waxay xoojinayaan go?aankeenna ku wajahan cirib-tirka argagaxisada?sidaasi ayuu yiri Ra?iisul Wasaare Cabdiweli, waxaana uu raaciyey.
?Dalku wuu soo hagaagayaa, dawladdu waa ay jiri doontaa, dadka Soomaaliyeedna way noolaan doonaan laakiin kuwa naf-lacaariga ah ee Argagixisada ku ah umadda soomaaliyeed iyagaa laga guulaysan doonaa, meel kasta oo ay joogaanna waan ku baacsan doonnnaa.?
Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa intaasi ku daray in Argagixisadu ay cadow ku tahay nolosha shacabka iyo horumarka dalka. ?Soomaaliya waxaa ay horay ugu socotaa dawladnimo iyo horumar ay qayb ka yihiin shacabka Soomaaliyeed ee kasoo gudbay dhibaatooyin aad u badan oo dalka ku dhacayay waqti dheer, kuwa ku soo duulay dalka iyo dadkawaxay ka kasbanayaan shacabka cadawnimio.?